Galvanized Steel Square tuuboyinka
Galvanized Steel qaab tuuboyinka
Galvanized Steel Oval tuuboyinka
Steel galvanized tuuboyinka qaabeeya
Galvanized Steel tuuboyinka rakiban
Henan Jialie Industry Co., Ltd waxa uu ku yaalaa ee Shiinaha ee bartamaha ganacsiga xarun-Zhengzhou. Waa Shiinaha ee ugu weyn ee gaarka loo leeyahay Al Industrial Co.Ltd, iyo mugga sheet Aluminum iyo coil dhoofinta darajada koowaad Joogta sagaal sannadood. Jialie waa shirkad isku dhafan leh ganacsiga adeegyada design, wax soo saarka, kala iibsiga technology iyo suuq. Shirkadda buuxda u dhaqmaan iyo kor ruuxyada "Si Live On Our Own Si Qaado Lead The Oo magooliyey", hadda, waxa uu ku sii kordhaya weyn, si dhakhso ah oo xoog ay.
Our mishiino ugu muhiimsan waxaa ka mid ah: Hot tusmo Mill, Mill ridaya Continuous, Afar-duuban karin Cold Rolling Mill The, Afar Roll karin bireed Rolling Qalabka. Waxa kale oo aanu ku qalabaysan ABB Nooca Tool, Xiisadda-barbareysay, Annealing Shooladaha, kurka Line, MILMA Shooladaha, demin Line, ma guurto Korontada Oiler Line, 2000-color daahan Production Line iyo qalabkii kale ee kaabayaal ah.
Waxaan siin karaa AL-saxan / gariiradda / bireed ah in ka badan 10 guutooyin daawaha oo ay ku jiraan 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx, 7xxx, iyo taxanaha 8xxx. The alaabta ugu muhiimsan waxaa ka mid ah Sheet Aluminum, gariiradda, bireed, bireed Air-weelka, Cable-bireed, Electronic Capacitor bireed, nabarrada bireed, bireed Baako debecsan, CTP Stock, Litho Stock, Cap Stock, tuman Plate, gadaaman gariiradda, Guddiyada Mirror, Gasacyada Cover qalabka, Aerospace Aluminum, caaryada qalabka Aluminum, iwm isla mar ahaantaana, waxa kale oo aanu aqbali wax soo saarka / ODM OEM sida ay shuruudaha macaamiisha.
Waxyaabaha Our hubkaas ayaa loo isticmaalaa in tareennada, Dhismaha maraakiibta, warshadaha baabuurta, daabacaadda, korontada, qalabka korontada, baakadaha iyo warshadaha kale. Waxyaabaha Our sidoo iibiyo dalka oo dhan oo waxaa la dhoofiyo Maraykanka, South Korea, Japan, Canada, Britain, Italy, India iyo wadamo kale iyo gobollada.
Iyada oo la casriyeeyay ee qalabka, Jialie waxaa si joogto ah hagaajinta awooda in ay ka jawaabaan jeer hogaanka u gaaban oo loo hubiyo dhalmo degdeg ah ee wax soo saarka aluminium tayo leh si ay macaamiisha.
Hogaamiye warshadaha ah, Jialie dhaqmayso heerarka tayada sareeya iyo sii wadaan in ay ku dadaalaan fiican si ay u koraan iyo ballaadhiyaan, gelinaya adeegga macaamiisha iyo qanacsanaanta ugu horeysay.
Waxaan rajeyneynaa in aan si fiican u adeega baahidaada.
Nala soo xidhiidh maanta si ay u sahamiyaan xal baahida aluminium aad!
Block B, Shenglong City, Degmada Erqi, Zhengzhou City, Gobolka Henan, Shiinaha.
Guide - Products Featured- Sitemap - Site Mobile
Steel Pipe Company, 1 X 3 Steel Tube, Gi Pipe Fittings Catalogue, Reducer, Galvanized Conduit Pipe, Gi Pipe Weight,